Contact khasaara waa dhibaato cajiib ah wax aad looga xumaado in ay la kulmaan leh. Ka saarida Shil, musuqmaasuqa - sababaha laga yaabo in kala duwan, laakiin niyad had iyo jeer waa isku mid. Waxaan rajeynayaa, waxaa jira qaar ka mid ah software run ahaantii waxtar leh in aad dhibaatadaas ka gudubto. Maanta waxaan ku tusi doonaa sida loo soo celin lumay / xiriirada tirtiray on smartphone Android iyadoo la kaashanayo Wondershare Dr.Fone for Android .
Wondershare Dr.Fone for Android - Xiriirada Android Recovery
Kabsado Android Message
Kabsado Content Samsung
1. Isku qalab si aad u computer iyo bilowdo Dr.Fone for Android.
2. Waxa kale oo aad u baahan tahay oo ku saabsan in ay beddelaan sahlo function Development for software in la qalab aad u shaqeeyaan. Dr.Fone Hagi doona habkan, sidaas waa in ahaataa mid si sahlan tahay in la sameeyo.
3. Marka Dr.Fone tilmaamaysaa qalab aad, aad u baahan tahay si ay u doortaan nooca xogta doonayaan in la soo celiyo. In kiis, waxaan dooneynaa in aan soo celiyo Xiriirada.
4. Riix Next. Hadda Dr.Fone u baahan yahay qaar ka mid ah waqtiga si aad u ogaato dhamaan xogta loo lumay. Waxaa laga yaabaa inay qaadato muddo ah, sidaas darteed samir.
5. Marka geedi socodka ka baxayo, oo aad ka heli kartaa dhammaan xogta baxey.
6. Dooro xiriirrada loo baahan yahay oo guji bogsadaan.
7.Choose buugga meesha si loo badbaadiyo macluumaadka aad baxey.
8.Now aad ka heli taariikhda ka folder la doortay.
9.If aad rabto in aad soo dhoofsadaan dhamaan xogta baxey in aad casriga dib, waxaad isticmaali kartaa MobileGO Wondershare u Android . Maxkamad version Free sidoo kale waa la heli karaa.
Talooyin Bonus ah ee Android Xiriirada Management
1. Marka aad ku abuuri karto xiriirada Android, hubi in xiriir kasta oo uu yahay google xiriir ah, si aadan u baahan inaad kooner hareeraha keyboard telefoonka gacanta ee ay isku dayaan in ay diyaarin, guraan, la abuuro, edit, iyo tirtirto xiriirada kuwa.
2. Si loo dhigay ilaa garaacaysaa Speed ​​on Android, waxa aad furan kartaa codsiga Xiriirada, garaac Menu Speed ​​button Dial, ka jaftaa lambarka aad rabto in aad ku darto xiriir ah oo ay doortaan xiriir ah.
3. Dib ugu xiriirada aad hadda ka dibna inuu idinka ilaaliyo oo laga badiyay xiriiro muhiim ah. Waxaad dooran kartaa MobileGo Wondershare inay sameeyaan hawl aad u.
> Resource > Ladnaansho > Xiriirada Undelete ka Android Phones